Kadhannaa waa’ee dararaa fi ajeechaa saba keenya irra jiru ilaalchise
« Public Statement of Oromo Religious Organizations on the killing and injuries…
Join us for Ecumenical Advocacy Days »
“Guyya rakkinaatti na waammadhu, anis isa kessaa butee sin baasa, ati immo ulfina anaaf in latta.” Macaafa Faarfannaa. 50:15
Gooftaatti kan jaallatamtaan amantoota fi duuka bu’ota isaa hundumaafi,
Waaqaayoo bara keenya darbaan hundaatii eegee haala gaarii fi hamma kessatti, karaa mijataa ta’ee fi nama hin taane irratti geggessaa nu tahe guyya har’an nu ga’eera.
Kessumattu waggan kun saba keenyaafi yeroo salphaa akka hin turre beekamaadha. Karaa heddu sabni keenya, midhamaa akka jiru waan walitti himu nu barbaachisu mitti.
Qe’ee itti gudatee kessatti, bakka abaabiyuun isaafi akakkayuun/akkon isaa itti awaalamaan, lagaa fi dacha keesaa fiige jaboota tikse, qotee horatee, sodaa fi shakki tokko malee kessatti nagadatee, fuudhee heerumsiise, sagadaa demme, … kessatti salphachuun isaa gadda guddaa nutti dhageesisera,
Dhiphinii fi rooroon irra ga’a jiruu hammana jedhamee hin dubatamu. Rakkin saba keenya seenaa darban hundaa kessatti bekkamaa ha’tau iyyu malee inni bara kana adda. Waaqayyo garuu sabaa maqaa isaati waamame akkasumaan cal jedhee hin dhiisu. Isa guddaa maqaa isaatiif jedhe ni dirmataafi.
Abdiin nuti qabnu akkas jedha. “Guyya rakkinaatti na waammadhu, anis isa kessaa butee sin baasa, ati immo ulfina anaaf in latta.” Macaafa Faarfannaa. 50:15. Abdii jiratta akkasi qabna sababa ta’eefi sabnii Waaqayyo abdii otuu hin kutatiin iddo dhaabbata isaani otuu gad hin dhiisiin jabataani haalaa hadhaawwa kana keesa darbuu danda’uu qabu. Gaddi keenya gammachuu itti aanutti nu dabarsuutu irra jira.
Haalli torban darbee bakka irrechaatti saba keenya mudatee dubbachuun isaa salphaa mitii. Haatii Oroomoo deesee gaddan yeroo ishee dabarsitee. Jajjabaachuun bayye ishee dhibe. Sagaleen bo’ichaafi wawwannaan ishee guddaa ture. Haatii Oromoo deese ijoollee isheetiif in boosse, isaan waan dura dhumaniif, waan hin jirrefis jajjabaachuu in didde.
Waaqayyo garuu akkas jedhee ishee abdachiisa. (Ermiyaas 31: 15-17,(Waaqayyo itti fufee,”Sagaleen Raamaatti dhagga’ame,Sagalee boo’ichaa fi wawwaannaa guuddaa ture,Raahel ijoollee isheetiif in boosse,Ijoolleen ishee waan hin jireef jajjabaachuus in didde*Ati garuu dadhabbiin kee gatii siif argate,Ijoolleen kee biyya diinaatii deebi’anii waan dhufaniif boo’icha kee dhiisi Imimmaan kees hin dhangalaasin!!Ati si’achi abdii qabda,Ijoolleen kee gara biyya isaaanitti in deebi’u; kana waaqayyotu dubbate.!!
Guyyaa kadhanaa fi warra lubbun isaani karaa adda adda darbee yaadachuufi ibsaa qabsiisuu kanan dura gaafa November 6, 2016 waliin rawwanna jenne dabarsinee kan ture, haala arifiachiisaf dirqamsiisa kana jenne “Boordiin Tokkuma Waldoota Oromoo” kan aduunyaa guyya kana gaafa October 16, 2016 akka tahu murteesinerra. Hamma gaafa sanaatti amantoota jajjabessun, sagalee abdii Waaqayyoo nu kenne wal-yaadachiisuun akka turtan issin kadhanna.
Yeroo tasgabbii fi kadhatatti cimmu akka qabaattaniif human isaa fi ayyana isaa isa dhuma hin qabneetti isin laatna.
Eeebbaa fi nagaa Waaqayyo keesa deddebi’aa.
Lb. Alamu Sombo
President, Tokkummaa Waldootaa Warra Wangeelaaa Oromoo